Madaxweynaha Puntland oo Cabdiweli Gaas oo $3.5 Milyan dollar ku Wareejiyey Mashaariicda Puntland ka socota[Sawirro] | SAHAN ONLINE
Madaxweynaha Puntland oo Cabdiweli Gaas oo $3.5 Milyan dollar ku Wareejiyey Mashaariicda Puntland ka socota[Sawirro]
GAROOWE – Madaxweynaha Puntland Cabdiweli Maxamed Cali Gaas ayaa maanta wareejiyay lacag gaareysa Saddex Milyan iyo Bar doolar ($3.5 milyan) oo loogu talagalay dhamaystirka Garoonka diyaaradaha Garoowe iyo wadada Ceeldaahir iyo Ceerigaabo.
Munaasabad kooban oo lagu wareejinayay lacagta ayaa lagu qabtay xarunta Jaamacadda Bariga afrika ee Bosaso, waxaana ka qaybgalay Madaxweynaha Puntland Cabdiweli, xubno ka socday gollaha wasiiradda, Xildhibaan, Isimo, Guddiga dhismaha wadada Ceeldaahir iyo Ceerigaabo iyo martisharaf kale.
Dhamystirka garoonka caasimadda Puntland ee Garoowe oo u baahan $3milyan oo Dollaar ayaa Madaxweynuhu ku wareejiyey guddiga dhismaha garoonka $2.5. Dhismaha waddada Ceel-daahir-ceergaabo ayaa Madaxweynuhu ku wareejiyey guddiga dhisaaya $1.000 000, hal milyan oo Dollarka Maraykanka ah.
Madaxweynaha Puntland oo faahfaahin ka bixiyay sababta ay dowladu ugu bixinayso lacagta garoonka Garoowe, wuxuu sheegay in muddo sideed bilood ah ay sugayeen qaybtii labaad ee lacagta mashruuca Garoonka oo ay ku deeqday DOwladda Kuweyt.
“Muddo sideed bilood ayaanu sugaynay qaybta labaad ee lacagta, Maalin kasta , maalinwalba la hadalo Cabdiqaadir Aamin oo ah safiirka dowladda federaalka u fadhiya Kuwait, maalina la hadla nimankii qandaraaska mashruuca la siiyay, Amiirkii ku martiqaadi doono, waxaana is weydiiyey xiliga amiirku firaaqo u heli doono Garoon Soomaaliya ku yaala dhismihiisa” ayuu yiri Madaxweyne Gaas, wuxuuna sii raaciya.
Dhamaystirka garoonka Garoowe waxaa ku baxaysa $3 milyan dollar, Labo milyan Bar Dowladdaa bixisay, waan eegaynaa inta hartay reer Garoowe ama reer puntland sidaad uga qaybgashaan” ayuu sii raaciyay.
Madaxweynuhu wuxuu kaloo ka hadlay muhiimada ay Puntland u leedahay dhismaha Wadada Ceel-daahir iyo ceerigaabo, waxaana uu guddiga dhismaha wadadaasi ku wareejiyay Lacag dhan Hal Milyan oo dollar oo lagu soo iibin doono Qalabka daamurka lagu kariyo iyo qalab kale oo wadada muhiim u ah, iyadoo ilaa hadda la dhamaystiray oo jeygii la dhigay 43 Km oo qayb ka ah 90km oo la doonayo in laami la saaro wajiga kowaad ee Wadada.
Dhinac kale, Munaasabada xilwareejinta lacagta Waxaa hadalo isugu jira mahadnaq iyo dhiirigalin ka jeediyay Wasiirka Duulista Garoomada Xasan cadde, Wasiirka Howlaha Guud Cabdirashid Maxamad Xirsi , Islaan Ciise Islaan Maxamed, culuma’udiin iyo Guddiyadda dhismaha Garoonka iyo wadada, iyagoo ku ammaanay madaxweynaha waxqabadkiisa kaabayaasha dhaqaalaha dalka.
Lacagtan Madaxweynuhu wareejiyey kama hadlin haölka ay ka timid waxaase la ogyahay in ay tahay lacag Bonus ah oo shirkadda DP WOrld ugu deeqdey Puntland taas oo gaareysey $10milyan oo Dollar. Marka laga yimaado lacagta maanta la wareejiyey ayaa waxaa haraysa mid taas ka badan oo gaareysa $6.5milyan oo dollar.